Iimfundiso ze-Promethium - Itheyibhile yePeriodic Ele Elements
Funda kabanzi malunga ne-Promethium okanye i-Pm yeChimicals kunye nezinto eziphathekayo
I-Promethium yi-radioactive engaqhelekanga yinyithi yomhlaba . Nantsi iqoqo lezinto ezithandekayo ze-promethium element :
Iimpawu zokuthakazelisa ezenza umdlalo
Upelo lwangaphambili lwegama elithi promethium lwaluyi-prometheum.
Iqumrhu libizwa ngokuba ngu-Prometheus, iTitan owaba umlilo kwizithixo zamaGrike ukunika uluntu.
I-Promethium yayiyinto yokugqibela engaqhelekanga yomhlaba wechungechunge lwe-lanthanide eya kufunyanwa. Kwafunyanwa ngo-1945 nguJacob A. Marinsky, uLawrence E. Glendenin, noCharles D. Coryell, nangona ubukho balo buye kwaxelwa kwangoku ngo-1902 ngu-chemist weCzech uBohuslav Brauner. Iqela likaMarinsky lifumene i-promethium kwimveliso ye-urission fission ngexesha lophando lweManhattan Project e-Oak Ridge, TN.
Zonke i-isotopes ze-promethium zi-radioactive . Yona kuphela i-radioactive engaqhelekanga yinyithi yomhlaba kwaye yenye yezinto ezimbini ezivakalayo ezilandelelanayo ezilandelwa zizinto ezizinzile kwitafile zexesha. Enye into efana nale yi-technetium.
I-isotopu ye-Promethium ivelisa i-ray-ray ngokubola kwe-beta . Ama-isotopu angama-29 ayaziwa, ngamanani amaninzi ukusuka ku-130 ukuya ku-158.
I-Promethium ilungiselelwe kwibra. Kuyinto engaqabile kakhulu kuMhlaba, nangona sele ifunyenwe kwiimpawu ze-pitchblende ezivela kwi-uranium ye-uranium.
Isimo esisodwa se-oxidation esisigxina se-promethium si-3+, nangona singenziwa ukubonisa isimo se-2+ se-oxidation. Oku kuqhelekileyo kwizinto ze-lanthanide.
Isinyithi esicocekileyo sinokubonakala. Amagqabi e-promethium akhanyayo aluhlaza okwesibhakabhaka okanye aluhlaza, ngenxa yokubola kwe-radioactive.
Ngenxa ye-radioactivity yayo, i-promethium ithathwa njengetyhefu.
Iimveliso ze-Promethium zinokusetyenziswa kwezixhobo ezininzi, zonke iinkqubo zokujongana ne-radioactivity yayo kunezixhobo zamakhemikhali. Abaqalayo be-pacemaker basebenzisa amabhetri enyukliya athembele kwi-promethium. It isetyenziswe kwimithombo yamandla e-missile ne-spacecraft, njengomthombo we-beta wokulinganisa ijiji, kunye nokwenza iipende ezikhanyayo.
I-Promethium Chemical kunye neZakhiwo zePhysical
Igama le-Element: Promethium
Inomic Number: 61
Ubunzima be- Atom : 144.9127
Uhlobo lwe-Element: I-Earth Element ejwayelekile (i-Lanthanide Series)
Umcebisi: JA Marinsky, LE Glendenin, CD Coryell
Usuku lokufumana: 1945 (eMerika)
Igama Umthombo: Obizwa ngokuba nguThixo waseGrike, u-Prometheus
Ubuninzi (g / cc): 7.2
I-Melting Point (K): 1441
Indawo yokubilisa (K): 3000
I-Covalent Radius (ntambama): 163
I-radion Radius: 97.9 (+ 3e)
Uhlobo oluthile (@ 20 ° CJ / g mol): 0.185
I-Pauling Negativity Number: 0.0
I-Energy First Ionizing (kJ / mol): 536
Uqwalaselo lwe-elektroniki: [Xe] 4f5 6s2
Iingxelo: ILebhu yeSizwe yaseLos Alamos (2001), i-Crescent Chemical Company (2001)
I-lithium Isotopes - I-Decay Decay ne-Half-Life
Umzekelo wokubalwa komthetho waseDalton
Iimali zentengo zichongiwe
Iimpawu zephepha ezimnyama
Imbali yeData yokuDansa
Iyintoni indlu ye-Smart? Ziziphi iiDomotics?
Ukutshatyalaliswa kweDoloid: Indlela yokwakha iiNtsana ezinkulu
I-Taxonomy kunye noLungiso lweMpilo
Gran Dolina (Spain)
Indlela abaPhathi beeNgqungquthela bePolitiki abaKhethwe ngayo